ဩဂုတျ 2020 – Healthy Life Journal
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဗောက်ထတဲ့အခါ သဘာဝနည်းနဲ့ ကုသလို့ရမယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ သဘာဝဆေး (၁) အုန်းဆီ အုန်းဆီမှာ သဘာဝအစိုဓာတ် ထိန်းနိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် ယားယံတဲ့ဦးရေပြားကို သက်သာစေပြီး ဗောက်တွေကို ကင်းစင်စေပါတယ်။ အုန်းဆီကို ဦးရေပြားမှာ တိုက်ရိုက်ပွတ်လိမ်းပေးပါ။...
—၊ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ တညင်းသီးစားလို့ ရပါသလားဆရာ။ တညင်းသီးစားရင် ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ နောက်တစ်ခုက ဆူးပုပ်ရွက်ကော စားလို့ရပါသလား။ A. တညင်းသီးကလေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာမှ မဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘယ်သူမှ...
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— အသက်ငယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြီးသူပဲဖြစ်ဖြစ် ကျောက်ကပ်ကျန်းမာဖို့ အလွန့်အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အတွက် ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းသင့်တာပါ။ သင်က အခု ကျောက်ကပ်ကျန်းမာနေတယ်ဆိုရင် ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ (၁)...
မိုးတွင်းကာလ တစ်မိသားစုလုံး ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းစေမည့် နည်းလမ်း ၇ ရပ်
———၊ မီမိုး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— မိုးတွင်းကာလမှာ ကလေးမှစပြီး လူကြီးအထိ တစ်မိသားစုလုံး ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းပြီး ကျန်းမာနေစေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ရောင်စုံဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စားပါ ရောင်စုံဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ချက်ပြုတ်စားသောက်တာကြောင့် မိုးတွင်းမှာ ကိုယ်ခံအားစနစ် မြင့်တက်စေပါတယ်။ (၂)...
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကျွန်မသမီးက အခု ၁၄ နှစ်ကျော်ရှိပါပြီ။ ၀က်ခြံတွေ စထွက်နေလို့ပါ။ ဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲ၊ အစားမှားလို့လားရှင့်။ A. ဆယ်ကျော်သက် ကလေးအတော်များများက ၀က်ခြံထွက်တဲ့ ပြဿနာကို ခံစားရပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့...
အသည်းအဆီဖုံးခြင်းနှင့် အသည်းခြောက်ရောဂါရှိသူတို့ ဘာစားသင့်သလဲ
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. အသည်းအဆီဖုံးခြင်းနဲ့ အသည်းခြောက်ရောဂါ တွဲဖြစ်နေသူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုအာဟာရတွေကို စားသောက်သင့်ပါသလဲခင်ဗျ။ A. အသည်းအဆီဖုံးတာ(Fatty Liver)နဲ့ အသည်းခြောက်တာ တွဲဖြစ်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ အဖြစ်များတဲ့သူတွေကတော့ အရက်သောက်တဲ့သူတွေရယ်၊ အ၀လွန်တဲ့...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး အောင်မြင်ထင်ရှားတဲ့ သူဌေးသားတစ်ယောက်က သူ့မိဘနှစ်ပါးကိုခေါ်ပြီး ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ် စားသောက်ဆိုင်မှာ ညစာလိုက်ကျွေးပါတယ်။ ညစာစားနေတုန်း နာမည်ကျော် စန္ဒရားဆရာတစ်ယောက်က စင်ပေါ်တက်လာပြီး ဖျော်ဖြေတင်ဆက်တဲ့အခါ- သားဖြစ်သူက သူငယ်စဉ်ကလေးဘ၀မှာ စန္ဒရားသင်ခဲ့ဖူးတာကို သွားအမှတ်ရလိုက်ပါတယ်။ “...
ဩဂုတျ လ၊ 2020 ခုနှဈ